Koreen Fannoo Dimaa Kan Addunyaa Gargaarsa Raabsaa Akka Jiru Ibsee Jira
Bitootessa 30, 2022
FAAYILII - Koreen Fannoo Dimaa Tigraay keessatti gargaarsa yeroo keennu
Koreen fannoo dimaa kan addunyaa dhalattoota Tigraay kanneen bulchiinsa nannoo Afaar Ab Aalaa irraa buqqa’anii gara samara fi Afdeera tti godaananii turan 16,000 caalaniif deggersa adda addaa kennuu isaa beeksisee jira.
Koree fannoo dimaa addunyaaf itti gaafatamtuu qunnamtii uummataa kan ta’an Faatiima Saator RSA f akka ibsanti, kanneen godaanan kun irra hedduun dhalatttoota Tigraayi.
Samaraa keessa kan jira kanneen kuma 9 ta’aniif gargaarsa nyaataa kennaa jiru Afdeera keessattis buqqaatoota 7500 ta’aniif nyaata baatii tokkoof isaan ga’u dhiyeessaa jirra jedhan.Kana malees meeshaalee mana keessatti itti gargaaramanis kennuu isaanii dubbatanii jiru.
Gama kaaniin Mi’aa wal’ansa fayyaa fi isatti hidhata qaban Maqalee keessa kan jiru hospiitaala Haaydariif kennuu isaanii fi kunis wal waraansa irratti kanneen mada’an 300 fi dhukkubsattoota kanneen biroo 400f tajaajiiluu akka danda’uu ibsamee jira.
Balalii xayyaaraa gara Maqaleetti taasifamuu itti fufuu isaa fi hanga ammaatti yeroo 25 deddebi’uu isaanii akkasumas Maqaleen alatti naannoo jiranittis meeshaa harkaan dhiibuun bishaan maddisiian 77 hojii jalqabsisuun haadhooliin dhiyeenyatti bishaan argachuu danda’aniru.
Bulchiinsa naannoo Amaaraa keessatti meeshaan wal fakkaataan 49ni dhaabuun hojjatamaa kan jiru ta’au kan ibsan Saator keemiikaalli bishaan qulqulleessuu kennamuus dubbatan.Magaala Baatii fi Haayiqiif jenereetarri kennamuu, Afaar somaalee fi oromiyaa keessatti beeleedaalee miliyoona 1.1 ta’aniif talaaliim kennamuu ibsameera jechuun Addis Chakkool gabaasee jira.